Madaxweynaha Maamulka Jubbaland oo Booqday Darbiga ay Kenya ka Dhisayso Xuduuda Soomaaliya (SAWIRRO)
Madaxweynaha maamul Goboleedka Jubbaland Mudane, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa booqday Xuduudka Soomaaliya iyo Kenya kala qaybisa ee Magaalooyinka Beledxaawo iyo Mandheera, isagoo sidoo kalena booqday halka ay Dowlada Kenya ka dhisayso darbiga mudooyinkii lasoo dhaafay uu muranku ka taagnaa.
Kenya ayaa sheegtay inay darbigan kaga gol leedahay inay isaga yareyso weerarada Ururka Al Shabaab ay ka gaysteen deegaanada xuduuda oo ay aaminsan yihiin in laga soo qaado dhanka gudaha dalka Soomaaliya.
Madaxweyne Madoobe ayaa safarkan waxaa ku wehlinaayay Wasiirka amniga Maamulka Jubbaland C/rashiid Janan iyo Sarakiil ka tirsan ciidamada Maamulka Jubbaland.
Axmed Madoobe ayaa tagay Jimcihii la soo dhaafay Magaalada Baled Xawo ee Gobolka Gedo, kadib markii todobaadkii hore ciidamada Shabaab ay weerareen xerada Ciidamada Jubbaland ee deegaankaasi.
Madaxweynaha ayaa Gobolka Gedo waxa uu ka wadaa dhiiragelinta Ciidamada Maamulkaasi si ay ula dagaalamaan dagaalyaanada Al Shabaab oo kordhiyay maalmahan dambe weerarada ay ku qaadayaan Saldhigyada Ciidamada Jubbaland.
September 20, 2017 Geesey
Madaxweynha Jubbaland iyo Ciidamo uu Wato oo Gaaray Degmada Afmadow (SAWIRRO) January 8, 2019
Ra’iisul wasaare Khayre oo Kormeeray Howlaha Dekadda Muqdisho (SAWIRRO) January 6, 2019
Wakiilkii Qaramada Midoobay ee Soomaaliya oo Dalka Laga Eryay & Dowladda oo ka Hadashay (VIDEO) January 2, 2019